नेकपामा ‘एक व्यक्ति एक पद’ कति सम्भव ? के यो बहसले नेकपामा ठाउँ पाउला ? - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेकपामा ‘एक व्यक्ति एक पद’ कति सम्भव ? के यो बहसले नेकपामा ठाउँ पाउला ? - www.khabardabali.com
नेकपामा ‘एक व्यक्ति एक पद’ कति सम्भव ? के यो बहसले नेकपामा ठाउँ पाउला ?
भदौ ५ गते, २०७६ - १५:१६
काठमाडौं । पार्टी एकता प्रक्रियामा आफुँलाई पाखा लगाउँदै र एक्लो बनाउँदै लगेको महसुस भएपछि नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ‘एक व्यक्ति एक पद’ को विषय पार्टी भित्र प्रवेश गराएका छन् । पार्टीको विधानमा नै उल्लेख भएको र बेला–बेला पार्टी भित्र उठिरहेको बहसमा नेता नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’मार्फत नै अडान लिएपछि अहिले नेकपाभित्र यसबारे बहस छेडिएको छ ।
पार्टी एकताको लामो समयसम्म यसबारे मौन रहेका नेता नेपालले पछिल्लो साता सचिवालयले एकतासम्बन्धी लिएको निर्णयसँगै यस विषयमा आक्रामक रुपमा आएका हुन् ।
नेता माधव नेपालले बहस चलाएको र नेकपा एकतासँगै नेकपामा भित्र भित्रै बहसमा रहेको ‘एक व्यक्ति एक पद’को विषयमा आज हामीले नेकपाकै नेतासँग कुराकानी गरेका छौं । एकता प्रक्रिया नै पुरा नभईसकेको र एक खालको संक्रमणमा रहेको पार्टीभित्र ‘एक व्यक्ति एक पद’ कार्यान्वयनको विषय कति सहज छ ? के यो अहिलेको बहस हो ? नेकपा नेता रघुजी पन्त, देवेन्द्र पौडेल ‘सुनिल’ र राजेन्द्र पाण्डेसँग खबर डबलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
भदौ ५ गते, २०७६ - १५:१६ मा प्रकाशित
वाध्यात्मक परिस्थितिको कारण मापदण्ड कार्यान्वयन नभएकाे हो
देवेन्द्र पौडेल ‘सुनिल’
काठमाडाैं । ‘एक व्यक्ति एक पद’ सिद्धान्तत राम्रो कुरा हो । कमरेड माधव या कमरेड वामदेवले जसले उठाएपनि एकजनाले एउटा मुख्य जिम्मेवारी लिउँ भन्ने विषय उपयुक्त हुन्छ । कसैलाई जिम्मेवारी पनि पुरा गर्न नसक्ने गरि ३/४ वटा जिम्मेवारी दिने अनि कोही जिम्मेवारी विहिन हुने कुरा कम्युनिष्ट पार्टीमा हुनुहुन्न । कमिटिमा आईसकेपछि व्यक्तिको रुचि, योग्यता, क्षमता र चाहनालाई ध्यान दिएर उसले जिम्मेवारी पाउनुपर्छ । यो सिद्धान्तत ठिक विषय हो ।
तर, यहाँ पार्टीमा आफ्नो अनुकुलता भयो भने प्रश्न उठाउन छोडिदिने, आफ्नो अनुकुलतामा भएन, आफ्नो नजिकको कहिँ कतै परेन भने फेरि त्यहि कुरा उठाउने कुरा राम्रो संकेत होइन् । जे कुरा सिद्धान्तमा उठेका छन् आफ्नो नजिकको होस् या कसैसित नजिकको होस् सबैको हकमा यो कुरा लागु हुनुपर्छ । कमरेड माधव जीले कमिटिमा छलफलको लागि राख्ने कुरा जायज नै छ । बाहिर राख्न हुँदैन् । कम्युनिष्ट पार्टीले बनाएको प्रचलित विधान नियमअनुसार आफ्नो मत, दृष्टिकोण र उद्देश्यहरु कमिटिमा राख्ने प्रचलित कुरा नै हो ।
तर अहिलेको परिस्थिति अनुसार निर्णय भईसकेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र मत राख्न ओपन हिसाबले छोड्ने कुरा उपयुक्त हुन्छ । कतिपयले भूमिका नपाउने कुरालाई अहिले पार्टी भित्र बनेको ब्याध्यात्मक अवस्थाले यसो भएको भन्ने लाग्छ । सकेसम्म कमिटिले गरेका निर्णयको स्वामित्व लिने, कार्यान्वयन गर्ने र सामुहिकतामा स्वीकार गर्ने कुरा सिद्धान्तत र संगठन प्रणालीको हिसाबले हामीले स्वीकार गर्दै आएको चरित्र पनि हो ।
दुई पार्टीको एकताको सन्दर्भमा हामीले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गर्यौं । दुई अध्यक्षको बीचमा आवश्यक सुझावसहित सहमति गरेर कार्यान्वयन गर्न विशिष्ट परिस्थितिको बीचमा यो निर्णय गरेका हौं । संक्रमणकालिन अवस्थामा पार्टी छ, कुनै प्रक्रियाबाट पार्टी नेतृत्व निर्वाचित वा चयन भएको अवस्था होइन् । मनोनित प्रकारले विश्वासका आधारमा अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म वा निर्वाचित प्रक्रियाद्धारा कमिटि प्रणाली निर्वाचित नहुँदासम्म यो विधि अपनाउनु हाम्रो परिस्थितिको वाध्यात्मक अवस्था हो ।
सचिवालयका, स्थायी समितिका, केन्द्रिय समितिका साथीहरुको छलफलमा भाग लिने चाहनालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म सचिवालयले गरेको कुरा स्थायी समितिले अनुमोदन गर्ने, न्यूनतम ५/६ महिनामा भएपनि केन्द्रिय समितिको वैठक राखेर त्यहाँबाट अनुमोदन गर्ने विधि अपनाउनु पर्छ । त्यो छुट्न गएको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याउनु पर्छ । फेरि पनि निर्णय भईसकेका कुराहरुलाई उल्ट्याएर जाने कुरा चाहिँ हुनुहुँदैन् ।
काठमाडाैं । ‘एक व्यक्ति एक पद’को विषय अहिले मात्रै उठेको होइन् । अहिले माधव कमरेडले कसरी ल्याउनु भो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । अलि चर्चा पनि भएको छ । तर, यो विषय लिखित रुपमै यसअघिको स्थायी किमिटको वैठकमा कमरेड वामदेवले राख्नु भएको थियो । अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले नै एक व्यक्तिले एक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर पार्टी भित्रै प्रस्ताव राख्नुभएको हो ।
पार्टीले विधानमै उल्लेख गराएको र स्वंय अध्यक्षले नै अगाडि बढाएको कुरालाई उठाएर चर्चा गर्नुभन्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक परिस्थितिलाई सहि ढंगबाट मुल्यांकन गर्नु पनि आवश्यक छ । पार्टी र सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरु बाध्यात्मक अवस्थाले पनि हुने हुन्छ । हामी एउटा विशेष परिस्थितिमा पनि छौं । दुई पार्टी तलदेखि माथिसम्मै एकता गरेर अगाडि बढ्ने कुरा चुनौतिपूर्ण विषय पनि हो । त्यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने कुरा सामान्य नै हो ।
अहिलेको सन्दर्भमा यो विषय जायज पनि छ । पहिला अलि हतार हो कि भन्ने मलाई पनि लागेको थियो । अब अहिलेको अवस्थामा वास्तवमै पार्टीलाई अगाडि बढाउन ‘एक व्यक्ति एक पद’को सिद्धान्तमा जानु उपयुक्तहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका हाम्रा अध्यक्ष कमरेड ओलीको स्वास्थ्यको अवस्था हेर्दा र उहाँले जिम्मेवारी पुरा गर्ने सबालमा समस्या देंखिदाँ दुवै जिम्मेवारी लिने कुरा उपयुक्त देखिएको छैन् । उहाँले दुई जिम्मेवारी मध्ये एउटा छनौट गरेर लिँदा राम्रो हुन्छ । अन्य साथीहरुको सन्दर्भमा विशेष परिस्थितिको रुपमा बुझ्दा राम्रो हुन्छ ।